Life in Fukuoka "Nepali" Vo.30
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.28
【भोक लाग्ने शरद ऋतु】
अब, अक्टुबरको मध्यमा, धानको फसल समाप्त भई, शरदका तरकारीहरूको फसल हुने शुरु भएको छ। यस समयमा तातो खाना खान पनि मन परेर आउँछ।
अन्न, चामल र सखरखंड लगायत बिभिन्न थरिका फलफूलहरू जस्तै, नाशपाती, अंगुर र चेस्टनट जस्ता, शरद मौसममा पाईने धेरै खानेकुरा छन्। जापानको चार मुख्य ऋतुहरुमध्ये, यो शरद ऋतु एउटा रमणीय मौसम हो।
के तपाईंलाई थाहा छ, जापानमा शरद ऋतुलाई “स्योकुयोकु नो आकी”(しょくよくのあき) अर्थात् "भोक लाग्ने शरद ऋतु" पनि भनिन्छ।
किन हामीलाई शरद ऋतुमा बेसी भोक लाग्छ त?
भनिन्छ कि, गर्मीको कारण हराएको भोक पुर्न जागेर आउने र त्यस्तै बजारमा पनि धेरै स्वादिष्ट मौसमी खानेकुराहरु पाईने भएकोले शरदमा धेरै भोक लाग्छ, तर हालसालैको वैज्ञानिक अध्यन अनुसार, Basal Metabolic Rate अर्थात् शरीरलाई आराम अवस्थामा आवश्यक क्यालोरीको मात्रामा वृद्धि हुनु यसको प्रमुख कारण मानिन्छ।
जापानमा शरद मौसमको तरकारीहरुमा मुख्यतयाः, आलु, गाजर, शिईताके, गोबोउ, र सखरखंड हुन्। यस पालीको शरद ऋतुमा, यी तरकारीहरु प्रयोग गरेर, तात्-तातो परिकार बनाएर खाएर हेरौं न है।
【घुमघामको जानकारी [Uminonakamichi Seaside Park मा फूल महोत्सव(९/१९～११/३)]】
आज, मैले शरद छुट्टीको लागि रमाईलो घुमघामको जानकारी लिएर आएकी छु।
हाल, फुकुओका शहरको हिगाशी वार्डमा रहेको "Uminonakamichi Seaside Park" मा, नोभेम्बर ३ मंगलबारसम्म, “Uminaka Hana Matsuri 2020" अर्थात् फूल महोत्सव आयोजना भईरहेको छ।
यस शरद ऋतुमा, पातहरू चम्किलो रातो हुने, कोकिआ फूल, एकदमै आकर्षक देखिन्छ। तपाईंले यहाँ लगभग २०,००० जतिको कोकिआ फूलको विशाल बगैचा हेर्न सक्नुहुन्छ।
यस अतिरिक्त, शरद ऋतुका फूलहरू जस्तै Cock's comb र Cosmos फूलहरुको आनन्द लिनुका साथै,
विशेष गरी सप्ताहन्तमा, स-परिवार रमाइलो गर्न सकिने विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि आयोजना भईरहेको छ।
साथै, अक्टोबर १७ देखि नोभेम्बर १ सम्मको शनिबारमा, “Uminaka Asian Festival" पनि आयोजना भईरहेको छ।
थप जानकारीको लागि, https://uminaka-park.jp/ मा हेर्नुहोला।
अक्टोबर १८ आईतबार, पार्कभित्र प्रवेश निशुल्क रहेको छ।
घरबाट बाहिर निस्कनु हुँदा, नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रसार रोक्न; मास्क लगाउने, खोक्दा शिष्टाचारपूर्वक खोक्ने, आदि नयाँ जीवनशैली मनमा राख्दै, रमाईलो गर्नुहोला।
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.27
【“मध्य शरदको चन्द्रमाको” परिचय】
आजकलको मौसम, बिहान-बेलुका धेरै सजिलो भएर आएको छ।
यो वर्षको ‘च्युउस्युउ नो मेईगेचु’ अर्थात् ‘मध्य शरदको चन्द्रमा’, आज अक्टुबर १ बिहिबारमा देखा पर्नेछ।
‘च्युउस्युउ नो मेईगेचु’ भनेको चन्द्रमामा आधारित क्यालेन्डर अनुसार, अगस्त १५ को पूर्णिमा हो।
बर्षभरिमा, सबैभन्दा सुन्दर चन्द्रमाको रुपमा मानिने, जापानमा परापूर्वकालदेखि यसलाई हेर्ने परम्परा छ, र यस दिनलाई ‘ओचुकिमि’ अर्थात् ‘चन्द्रमा हेर्ने दिन’ भनिन्छI गर्मी समाप्त भई, जाडोको शुरु हुने यस समयमा, पूर्णिमाको रातको आनन्द लिनु भनेको एक किसिमको, जापानको शरद ऋतुको परम्परा हो।
जापानिज मिठाई ‘डान्गो’ र ‘सुसुकि’ भन्ने घाँसले सजाएर, शरद फसलको लागि धन्यवाद दिने र राम्रो बालीनालीको लागि प्राथर्ना गर्ने चलन छ।
१५ रातको चन्द्रमा भएकोले, यस दिनमा १५ वटा ‘डान्गोहरु’ चढाउने, अनि सामान्यतयाः पिरामिडको आकारमा सजाउने चलन छ। त्यस्तै, ‘सुसुकि’ लाई चामलको रुपमा सँगै सजाईने पनि गरिन्छ।
साथै जापानमा, चन्द्रमाको छाँया हेर्दा, खरायोले मोची बनाएको जस्तो देखिन्छ रे, त्यसैले चन्द्रमामा खरायो छ भन्ने किम्बदन्ती पनि छI
“राष्ट्रिय जनगणनाको फारम भर्ने बारे”
जापानमा, यस वर्ष राष्ट्रिय जनगणना गर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय जनगणना भनेको, प्रत्येक पाँच बर्षमा एक पटक, जापानमा बसोवास गर्ने सबै व्यक्ति र घरपरिवारहरुको जीवनस्तरको सर्वेक्षण हो। विदेशीहरू पनि यस सर्वेक्षणमा पर्दछन्।
सर्वेक्षणमा, जन्म मिति, पेशा, काम गर्ने ठाउँ वा स्कूल, बस्दै गर्नु भएको घर आदि १६ वटा बिषयहरु छन्।
सेप्टेम्बर १४ देखि, सर्वेक्षणकर्ताहरूले सबैको परिवारहरूको घर भ्रमण गरि, सर्वेक्षण कागजातहरू वितरण गरिरहेको छ।
स्मार्टफोन वा कम्प्युटरबाट सजिलै र सहज उत्तर दिन सकिने भएकोले, इन्टरनेट मार्फत भरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौंI
इन्टरनेटमा लगइन गर्दा, कागजातमा लेखिएको लगइन आईडी र Access key प्रयोग गर्नुहोस्।
चौबीसै घण्टा, जापानी, अंग्रेजी, चाइनिज, कोरियाली, भियतनामी, पोर्तुगिज, र स्पेनिशमा उत्तर दिन सक्नुहुन्छ।
यदि इन्टरनेट मार्फत भर्न गाह्रो छ भने, सर्वेक्षणको फारम भरेर पोस्ट गरेर पठाउनुहोस्।
कृपया अक्टोबर ७ सम्ममा भरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौँI
“सम्पर्क पत्ता लगाउने app -COCOA को प्रयोगको बारेमा”
जापानले कोरोना भाईरस सम्पर्क पत्ता लगाउने COCOA(कोकोआ) नामको app बनाएको छ। यदि तपाईं भाईरस संक्रमित व्यक्तिको १ मिटर भित्रको दूरीमा १५ मिनेट भन्दा बढि सम्पर्कमा आउनु भयो भने, यो app मार्फत तपाईंलाई सूचित गराईनेछ। यो नि: शुल्क app होI app द्वारा सूचना पाएको व्यक्तिले, यदि संक्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्कको मितिदेखि दुई हप्ता भित्र परामर्श गर्नु भएमा, पी.सी.आर.( PCR) परीक्षण नि:शुल्क प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
जति धेरैले यो app को प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यति नै संक्रमणलाई रोक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले, आफू र आफ्नो नजिकका मानिसहरुको सुरक्षाका लागि, कृपया आफ्नो मोबाइलमा यो app राख्नु होला।